China I-EEC L7e Umbane weCarkup Cargo abavelisi beemoto kunye nabathengisi | Yunlong
Imoto ye-EEC L7e yombane weCargo Cargo
Ukubeka indawo: Kulula ukuhamba ujikeleze nomthamo omkhulu womthwalo, ofanelekileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwezorhwebo kunye nolungiselelo, ukuthuthwa kwempahla, ukusuka kulungiselelo lweshishini ukuya kwisisombululo sokuhambisa imayile sokugqibela.
Isiqinisekiso: I-EEC L7e
Umthwalo: Iiyunithi ze-1 ze-1 * 20 GP, iiyunithi ezi-5 ze-1 * 40 GP, iiyunithi ezi-5 ze-1 * 40 HQ.
Imibala efumanekayo: Bomvu, Mthubi, Luhlaza, Luhlaza, Mhlophe, Mnyama, nantsi.
Ifestile yangaphambili: Iglasi ye-3C eqinisekisiweyo enobushushu kunye nelaminethiweyo Ukuphucula ukubonwa kunye nokhuseleko ngakumbi.
Imoto: Imoto ye-AC enomsebenzi wokubamba ngokuzenzekelayo, ubungqina obunamandla kunye namanzi, ingxolo engezantsi, akukho brashi yekhabhoni, ngaphandle kwesondlo.
Inkqubo yokuKhanya kwe-LED: Uhlobo oluncinci nolucekeceke lwezibane zemoto ze-LED, ukuhambisa ukukhanya okuphezulu kunye nokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
Isembozo sePlatemetal kunye nokupeyinta: Zintle kakhulu iipropati ezibonakalayo nezomatshini, ukumelana nokuguga, amandla aphezulu, ulondolozo olulula.
Ulwakhiwo olwenziwe kwinqanaba le-autoplate lenzelwe kunye nebumper yangaphambili eyenziwe ngetyhubhu yentsimbi kukhuseleko olwenziweyo. Iziko lethu eliphantsi lomxhuzulane linceda ukuthintela ukuqengqeleka kunye nokugcina uqhuba ngokuzithemba.
I-72v / 4000w imoto ye-A / C, i-powertrain iza nokungabikho kolondolozo, ukutywinwa kweebhetri ze-asidi. Imoto ye-AC efakwe kwii-asi ezingasemva inika amandla akhawulezileyo ngelixa kusandiswa ukusebenza kakuhle kunye nokonga umbane. Ikaliwe ngokulayisha i-500 kgs, kunye ne-2tons zokutsala ubuninzi (umphezulu wendlela egudileyo)
Eyakhelwe kwisakhelo seemodyuli zesakhelo seemodyuli, isinyithi sigxilwe kwaye sidityaniswe kunye ukhuseleko oluphezulu. I-chassis iyonke ithiwe nkxu kwindawo yokuhlambela ngaphambi kokuya kupeyinta kunye nendibano yokugqibela. Uyilo oluvalelweyo lomelele kwaye lukhuselekile kunabanye kwiklasi yalo ngelixa ikwakhusela abakhweli kwingozi, umoya, ubushushu okanye imvula.
Ukugcinwa kwe-Lead Acid ibhetri, ukutshintsha ngokulula, ama-300-500 amaxesha okutshaja imijikelezo (iminyaka eyi-1-2) phantsi kwendawo yokusebenza ukusuka -20 ukuya kuma-50 ° C. I-lithium udgrade iya kufumaneka kungekudala
Imoto ye-5000w, isixhobo sokupholisa umoya, i-bumper yangaphambili, i-front bumper engaphambili kunye nokukhanya okukhulu / okuncinci, i-tow hook, i-aluminium alloy rim
Idityanisiweyo yoyilo lwemitha yokubonisa i-LCD, ukubonisa ulwazi ngokubanzi, okucacileyo nokucacileyo, ukuqaqamba okulungelelanisiweyo, okulula ukuwaqonda ngexesha amandla, imayile, njl.I-intshi ye-7 ebhodini ukubonisa, ikhamera ebuyela umva, kunye neBluetooth, MP5, isinxibelelanisi se-USB njl
Imoto kunye neNkqubo yeMbane iwaranti unyaka omnye, i-Lead acid ibhetri ingunyaka omnye. Ngawo onke amanye amalungu, nceda ujonge incwadana yemigaqo.
I-EEC L7e Homologation Iinkcukacha zoBugcisa obuPhakathi
Pick-up Ubungakanani (mm)
Ukulayisha amandla （Kg）
100Ah Lead Acid Ibhetri
Ngaphambili 145-R12 Ngasemva 145-R12
Umboniso weLCD + Ukubuyela umva ikhamera
Ingcango kunye nefestile
Egqithileyo I-EEC L1e Ibhayisikile yombane
Okulandelayo: EEC L6e Electric Cabin Car-Y4
Imoto yemoto yombane
Isithuthi soMbane soMbane